22 SY 23 novambra 2016 : Atrikasa fanofanana sy fifanakalozana miaraka amin’ny fiaraha-monim-pirenena mahakasika ny tsenam-panjakana eto Madagasikara - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 21 Novambra 2016 ao amin'ny Hetsika,
Ao anatin’ny fandaharanasany entina hanatsarana ny fangaraharana sy ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny sehatra tsy miankina sy ny sehatra ara-panjakana, i Transparency International-Initiative Madagasikara dia mikarakara atrikasa fanofanana sy fifanakalozana eto Madagasikara ny 22 sy ny 23 novambra 2016 ao amin’ny DLC Anosy ( manoloana ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny) eto Antananarivo.
Ny fanadihadiana Kolikoly eny anivon’ny sehatra ara-panjakana eto Antananarivo (Corruption in Antananarivo’s Publics Services-CAPS) notontosain’i Transparency International-Initiative Madagasikara tamin’ny novambra 2014 izay maminavina fa ny roa ampahatelo (68%) n’ireo mpitantana orinasa miditra amin’ny tsenam-panjakana eto Madagasikara dia milaza fa tsy mahitsy ny fomba fizarana ireo tsena eo amin’ny sehatr’asan’izy ireo.
Ny fanadiahadiana 2016 mahakasika ireo tsenam-panjakana notontosain’I Transparency International-Initiative Madagasikara teo anelanelan’ny septambra sy desambra 2015 teo anivon’ny mpitantanana sy tompona orinasa nahazo farafahakeliny tsenam-panjakana iray ny 2013 na 2014, dia milaza kosa fa mba hahazoana antoka ny fahazoana ireo tsenam-panjakana dia mitaky fandoavana ny 25%n’ny lanjan’ilay tsena.
Nandritry ny atrikasa fanofanana sy fifanakalozana natao hoan’ireo fikambanan’ny fiaraha-monim-pirenena, I Transparency International-Initiative Madagascar dia hampiseho ny torolalany vaovao “ Ny « ny rafitry ny lalàna mifehy ny tsenam-panjakana eto Madagasikara ». Ity torolalana ity dia mikendry ny fanamorana ny fahazoan’ny daholobe ny lalàna mifehy ny tsenam-panjakana eto Madagasikara, ny hampiseho ireo fitsipika fototra mifehy ny tsenam-panjakana, indrindra ny fangaraharana, ary koa ny hampatsiahy ireo rafitra hisorohana sy hanasaziana ny kolikoly azo ampiharina, toy ny sazy hoan’ny fandikàn-dalàna sy ny ara-panjakana nohon’ny kolikoly natao mifandray amin’ny tsenam-panjakana.
Ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena dia hanadihady miaraka amin’ny alalan’ny asa isam-bondrona, ary haka ohatra, ny fanarahan-dalànan’ireo tsenam-panjakana nitranga nandritry ny fikarakarana ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia amin’ny alalan’ny fanadihadiana ireo ohatrana tsenam-panjakana nitranga nandritry ny fikarakarana ny fihaonana an-tampony ny 22 novambra sy ny 23 novambra ny maraina.
Ny fivoriana feno miaraka amin’ireo vokatry ny asan’ireo vondrona sy ny fanambaran’ireo fikambanan’ny fiaraha-monim-pirenena mahakasika ny fangaraharana eo amin’ny fanomezana ireo tsenam-panjakana izay ho atao ny alarobia 23 novambra. Ireo solotenan’ny andrim-panjakana malagasy sy ny mpiara-miasa ara-teknika sy ara-bola dia asaina amin’ny 2 ora hatramin’ny 4 ora.
Ny dikan-teny frantsay sy malagasin’ny torolalana « Ny rafitry ny lalàna mifehy ny tsenam-panjakana eto Madagasikara » ary koa ny fanambaran’ireo fikambanan’ny fiaraha-monim-pirenena mahakasika ny fangaraharana amin’ny fanomezana ireo tsenam-panjakana dia ho apetraka eto amin’ny tranonkala amin’ny faran’ny atrikasa.
Ity atrikasa ity dia atrehana amin’ny alalan’ny fanasana ihany.
Raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny mifandray amin’i Transparency International-Initiative Madagascar amin’ny communication@transparency.mg na amin’ny +261 (0) 20 22 288 73.